Filtrer les éléments par date : dimanche, 21 novembre 2021
dimanche, 21 novembre 2021 18:18
Ady tany Route du Fiherenana Toliara : Masobe tsy nahita ve ny ministeran'ny fanajariana ny tany ?
39 taona aty aoriana nakan'ny fanjakana ny tany 2ha, titre "Route de Fiherenana 6ème partie" ao Anketraka, Distrikan'ny Toliara 1, Faritra Atsimo andrefana, Faritany Toliara, izay efa nonerana sy voaloa vola tanteraka tamin'ny tompon'ny tany, vao avy ireto milaza fa mpandova ny tany, ka nitondra taratasy avy amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, fa averina (retrocession) amindreo ny tany tsy nampiasaina nanaovan-dalana, rehefa avy nandoa vola 600 000ar izy ireo ho an'izay tany izay.
Nolazaina tamin'izay fa tsy nisy nanamainty molaly ary tsy nisy nanorina fotodrafitrasa (terrain nu) teo amboniny, ka dia naverina amin'ny tompony teo aloha ny ambin-tany tsy nampiasaina.
Ny mahagaga izany, dia tsy nisy fitsirihina nataon'ny ministera ny fanajariana ny tany, na ny sampandraharahan'ny fananan-tany na ny domaine taty Toliara ve, nanamarina fa tena "terrain nu" marina ny tany natao retrocession io.
Tsy nanontany ny Kaominina Toliara, izay nomen'ny fanjakana ny ambin-tany rehefa vita ny lalana, izay milaza mazava fa tsy azo kasihina ny tany raha tsy misy fanapahana avy amin'ny filankevitry ny Tanàna. Ary ny Kaominina tompon'ny tany no efa nanome ireo tany ireo ho ana fianakaviana 11, izay samy nomeny permis de construire avy.
dimanche, 21 novembre 2021 17:27
Abakabaka : Handray mpitsangatsangana ny ISS
Tonga ao amin'ny toeram-piaingana anabakabaka rosianina ao Baïkonour, Kazakhstan ny mpanamory sambondanitra rosianina Alexandre Missourkine, miaraka amin'ny mpitsangatsangana miliaridera japoney Yusaki Maezawa sy ny mpiara-miasa akaiky aminy Yozo Hirano, hanao fanazaran-tena amin'ny sambondanitra Soyouz, mandritra ny 2 herinandro.
Hisy ny fizahana ara-pahasalamana aorian'izay ka hiazo ny zanabolana azo honenana Station spatiale internationale ISS eny amin'ny 400km ny 8 desambra 2021. Haharitra 12 andro eny izy ireo, ary anisan'ny hetsika 100 tiany atao ny badminton eny anabakabaka ambony eny.
45 taona ity miliaridera japoney ity, ary ny fivarotana lamôdy no nampanakarena azy.
Faniriany ny hitondra olona 8 manodidina ny volana ny taona 2023 miaraka amin'ny SpaceX, izay tsy afaka natao izay amin'ity dia ity, satria toerana 3 ihany no misy ao anatin'ny Soyouz.
Tapitra tamin'ny volana marsa teo ny fisoratana anarana ho an'ireo naniry ny hiaraka aminy, izay nisy fifantenana nataony avy eo.
(Sary nindramina japoney Yusaki Maezawa)
dimanche, 21 novembre 2021 16:45
Vondrona Afrikanina : Nihaona tamin'ny Minisitry ny Fitsarana ny solotena manokan'ny Filoha
Tonga nitsidika ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana IMBIKI Herilaza ny solotena manokan'ny Filohan'ny Vondrona Afrikanina ramatoa Hawa Ahmed Youssouf.
Niarahana nidinika tamin'izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa efa misy, ary nahafahana naneho ireo tetikasa sy drafitra stratejika eo anivon'ny ministeran'ny Fitsarana.
dimanche, 21 novembre 2021 16:43
Tsy fandriampahalemana : Mpanendaka sy Mpamaky trano voasambotry ny Polisy
Voasambotry ny Polisy PPA4 Antaniavo i Lava, jiolahy mpamerinkeloka amin'ny asa fanendahana.
Ny harivan'ny Zoma 19 novambra 2021 dia mpamily kamiao sy ny vadiny hitady sakafo hariva teo amin'ny tanimena be, mihazo an'iny Henri Fraise Ankorondrano, iny no lasibatr'i Lava sy Faby.
Voasambotra i Lava, fa vaky nandositra niaraka tamin'ny poketran'ny vadin'ilay mpamily nisy vola 1 240 000 Ariary, ary lakilen'ny fiara.
Vao 15 taona i Lava dia efa tratra nanendaka ka nigadra teny Anjanamasina nandritra ny sivy volana.
Mpivarotra eny antsisin-dalana eny Analakely i Lava ankehitriny saingy isaky ny fodiana hariva no manendaka eny Ankorondrano Andrefana, raha toa ka any Andavamamba izy no mipetraka.
Ny harivan'io zoma 19 novambra 2021 ihany koa no tratra indray i Rivo, mpamaky trano amin'iny Antohomadinika Centre sy ny manodidina iny.
Fotodrafitr’asa : Ho vitaina amin’ny desambra 2021 ny fanarenana tetezana ao Ankazoambo Ambositra
Efa tena potika ny tetezana miazo ny Kaominina Ambanivohitra Ankazoambo, Distrika Ambositra, Faritra Amoron’i Mania. Vao mirotsaka be eo ny orana dia sahirana ny mandalo eo.
Tsy ho afaka hamonjy sekoly ny Mpianatra, toy izany koa, ny mpamonjy CSB hitsabo tena.
Ao amin’ity Kaominina Ankazoambo ity no misy ny siniben-drano mamatsy rano Kaominina telo ao amin'ny Distrika Ambositra, dia ny Kaominina Ambonivohitra Ambositra sy Kaominina Ambositra faharoa ary ny Kaominina Ambanivohitra Ankazoambo.
Maika ny fanarenana ity fotodrafitr'asa ity. Noraisin’ny Faritra Amoron’i Mania ny fanamboara, ary ezahina ho vitaina amin’io volana desambra ho avy io izany, hoy ny Goverinora Mamiarisoa Radaloson, noho ny hamehana.
dimanche, 21 novembre 2021 13:45
Andaingo : Jiolahy avy nangalatra omby tra-tehaky ny Zandary
Jiolahy roa avy nangalatra omby tany Anjozorobe no tra-tehaky ny Zandarimariam-pirenena miasa ao Andaingo ny Alarobia 17 novambra 2021 lasa teo.
Enin-dahy izy ireo no niaraka fa tafaporitsaka ny efatra, ka ireto roalahy ireto ho hitan’ny olona mihaodihaody sady mampiahiahy tao Andaingo ka nisy nampandre avy hatrany ny zandary ao amin’ny “Poste Avancé” Andaingo.
Nanao ny vela-pandrika ireto farany ka tra-tehaka izy roalahy niaraka tamin'ny basy sy antsy lava.
Natolotra ny Fampanoavana tao amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Moramanga izy ireo, ary nampidirina am-ponja avy hatrany.